Gbasara anyị - Tspringwater Co., Ltd.
Anyị na-enye akwa akwa dịka Swimwear, Beachwear, integrating design, Underwear, Sexy Lingerie, Sportwear for women, men and children. Anyị nwekwara ike ịme akpa dị iche iche dị ka ịrịgogo, akpa nri ehihie, bag bag. Wdg.
Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ anyị na-eji igwe akwa akwa na usoro ọrụ iji mepụta uwe, kamakwa jiri ndị ọrụ nwere ahụmahụ. Anyị abụghị naanị na-eme ọrụ ODM, kamakwa ọrụ OEM.
Uru Companylọ Ọrụ
Nkwanye ugwu maka ndi ahia, iguzosi ike n’ezi ihe, Otu nke mbu
Ọhụụ ụlọ ọrụ: Mepụta ngwaahịa ndị kacha ewu ewu na ụwa
Company nkà ihe ọmụma azụmahịa: ịkwụwa aka ọtọ, imekọ ihe ọnụ, mmeri-mmeri ọnọdụ, mmepe!
Ọnọdụ ụlọ ọrụ: N'ike mmụọ, ahụike, nchekwube, ịnagide, nkesa, ịdị n'otu, obi ekele.
Ọrụ ụlọ ọrụ: Mepụta uru maka ndị ahịa, Ghọta nrọ maka ndị ọrụ, Ọganihu maka ala nna, ma gbalịsie ike maka obi ụtọ nke onwe ha na ezinụlọ ha.